Semalt विशेषज्ञ ई-वाणिज्य सामग्री मार्केटिंग को लागी एक 10-चरण गाइड प्रदान गर्दछ
SEO र सामग्री मार्केटिंग एक अर्कोमा निर्भर छन्। यद्यपि, जब योजनाबद्ध र राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिन्छ, सामग्रीले खोज प्रदर्शनलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सक्दछ। त्यसकारण, तपाईं कसरी सामग्री सिर्जनाको साथ एसईओ आवश्यकताहरू मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ?
यी दस सुनौलो नियमहरूमा तल जानुहोस्, Semalt Digitial Services को वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, आर्टेम Abgar द्वारा प्रदान गरिएको।
१. ग्राहकहरु को बारे मा ख्याल राख्नुहोस्।
सफल मार्केटरहरू आफ्नो ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू निर्धारण गर्न मार्केट अनुसन्धान अँगाल्नेमा छिटो हुन्छन्। ग्राहकहरूको लागि आवश्यक सामग्री विचारहरू जम्मा गर्ने अर्को निःशुल्क र द्रुत प्रविधि एसईओ कुञ्जी खोज अनुसन्धानको प्रयोग हो। यसलाई प्राप्त गर्न, प्रश्नहरूको जवाफ दिन छनौट गर्नुहोस् जुन मानिसहरूले खोजी ईन्जिनहरू सोध्छन् र अन्तर्वार्ता समर्थन कर्मीहरूलाई बढी विचारहरूको लागि।
२. सामग्री प्रकारहरू बुद्धिमानीपूर्वक छनौट गर्नुहोस्।
जब विषयको बारेमा लेखिन्छ जुन खोजीकर्ताहरूले ठूलो संख्यामा खोज्दछन्, लामो-फारम सामग्री राम्रो हुन सक्छ। थप रूपमा, त्यस्ता सामग्रीहरू भाषामा ड्राफ्ट गरिनु पर्छ जुन प्राय आगन्तुकहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। सामग्रीको उत्तम प्रकार निर्धारण गर्ने एक उत्तम तरिका भनेको विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिनु हो जुन गुगलमा राम्ररी छ।
Des. वर्णनात्मक पाठ समावेश गर्न नबिर्सनुहोस्।
जे होस् खोजी ईन्जिनसँग क्षमता निरन्तर विकसित हुन्छ, तिनीहरू अझै व्याख्यात्मक पाठको आवश्यक पर्दछ सामग्री, सामग्री र छविहरू भिडियोमा बुझ्न मद्दत गर्न। सँधै इन्फोग्राफिक्स वर्णन गर्नुहोस् र ट्रिप्सिप्सहरू समावेश गर्नुहोस् जुन तपाईंले बनाउनु भएको मुख्य पोइन्ट्स समावेश गर्दछ।
Don't. नबिर्सनुहोस् तपाईले के बेच्दै हुनुहुन्छ।
सामग्री विचारहरूको साथ टाँस्नुहोस् जुन तपाईं प्रदान गर्नुभएको सेवाहरू र उत्पादनहरूसँग मिल्दछ। यो स्पष्ट विचार लाग्न सक्छ। यद्यपि खोजीकर्ताहरू सँधै अवधारणा, सूचना र उत्पादनहरूको अनन्त संख्यामा रुचि राख्छन्। त्यसकारण, तपाईंको उत्पादसँग सम्बन्धित जानकारीको बाहिर सामग्री उत्पन्न गर्नबाट बच्नुहोस्।
Management. व्यवस्थापनका लागि नलेख्नुहोस्।
श्रोताको लागि लेख्नुहोस्। बाहेक, दर्शकहरूले समान एसईओ शब्दहरू प्रयोग गर्दछ जस्तै ब्यापार, डाइitch्गन र खालि वर्णनात्मक र सादा भाषा प्रयोग गरेर अद्वितीय सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्। अझै, कुञ्जी शब्दहरूको सन्दर्भमा, तपाईंले आफ्नो सामग्रीमा निर्णय लिँदा पहिले अनुसन्धान गर्नुभयो।
6. बिस्तारै, बेच्न सम्झनुहोस्।
इ-कमर्सका व्यापारीहरू शपरहरूलाई उनीहरूको साइटमा लैजान चाहन्छ जब उनीहरू खोज्दछन् र उपलब्ध सामग्रीबाट मोहित हुन्छन्। जे होस्, कहिलेकाँही यो सामग्री हो जुन उत्पादन र कोटीको सट्टामा श्रेणीमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विक्रेताले कसरी हेरविचार गर्ने वा केहि प्रयोग गर्ने भनेर प्रदर्शन गर्नुपर्दछ, र यसले आगन्तुकहरूलाई उत्पादन खरीद गर्न लोभ्याउन सक्छ।
Link. ई-वाणिज्य र सामग्री लिंक गर्नुहोस्।
लिinking्क दर्शकहरूको लागि पहुँच गर्न र सामग्री पचाउनको लागि महत्वपूर्ण मार्ग हो। साथै, यसले साइटको विभिन्न क्षेत्रहरूको महत्त्व बुझ्नको लागि खोजी ईन्जिनहरूलाई मद्दत गर्दछ। लिंकिंग जानकारी र सामग्रीमा हेडर र फुटर नेभिगेसन प्रयोग गर्नुहोस् ताकि आगन्तुकहरूले सजिलैसँग जानकारी र उत्पादनहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्।
Your. तपाईंको वेबसाइटमा सामग्री होस्ट गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ तपाइँको सामग्री श्रेणीकरण गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसलाई उही साइटमा राख्नुहोस् जुन तपाइँ उत्पादन बेच्न प्रयोग गर्नुहुन्छ र एक माइक्रोसाइट होइन। माइक्रोसाइट्स प्राकृतिक खोज प्रदर्शनमा फाइदाजनक छैनन् किनकि यो बाह्य लिंक हो।
Nd। सामग्री सिंडिकेट गर्ने विचार गर्नुहोस्।
तपाईंको साइट मा सामग्री सधैं सही आगंतुक आकर्षित गर्दैन। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, ई-वाणिज्य व्यापारीहरूले सामग्री सिन्डिकेट गर्नु पर्छ। यो अन्य साइटहरूमा सामग्री प्रस्ताव गरेर गरिन्छ जुन तपाईंको वेबसाइटमा होस्टिंग सामग्रीहरू भन्दा बढि छन्।
१०. सिन्डिकेटेड सामग्री प्रकाशित गर्दा सतर्क हुनुहोस्।
अर्को स्रोतबाट लेख प्रकाशित एक आकर्षक समाधान हुन सक्छ जब तपाईं आफ्नै सामग्री सिर्जना गर्न संसाधनहरूको अभाव हुन सक्छ। जे होस्, एसईओ दृष्टिकोणबाट, यो कोर्स ई-वाणिज्यमा हानिकारक छ। यसले अरू कसैलाई तपाइँको साइटमा उनीहरूको सामग्री होस्टिंग गरेर दर्जा प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।